Nandrolone Cypionate Soo-saareyaasha cufnaanta & Soo-saareyaasha - Warshadda
Nandrolone Cypionate Raw alaabta (601-63-8)
Nandrolone Cypionate waxaa loo arkaa mid ka mid ah tayada ugu sareysa, waxaana mid ka mid ah midka ugu fudud ee loo dulqaadan karo anabolic steroids weligeed la abuuray., Kaas oo lagu sameeyay nooca 19 Nortestosterone hormoonka Nandrolone. Waa dhererka Nandrolone kaas oo aad u la mid ah sterids Deca, marka laga reebo inuu yahay isbedel kaas oo u ogolaanaya awood dheeri ah iyo firfircooni dhaqso ah ee jirka.
Nandrolone Cypionate Cawlaam (601-63-8) video
Nandrolone Cypionate Raw Waxyaabaha (601-63-8) Sharaxa
Nandrolone Cypionate (Dynabol) Waxyaabaha cawska ah Waxaa lagu tilmaamaa steroid anabolic, kaas oo lagu sameeyay naqshadda hormoonka Nandrolone 19 Nortestosterone. Nandrolone Cypionate Raw waxay sidoo kale tahay 17-B ester of nandrolone. Nucrolone Nandrolone Cypionate Raw waxaa lagu talinayaa sidii gargaar loogu talagalay daaweynta waxyeellada marka kor u kaca miisaanka, dharka timaha ama xaaladda jireed guud ahaan la doonayo. Fududeynta ayaa inta badan ka soo baxda cudurka ama laga yaabo inay dhacdo ka dib marka la eego shaqada dheeraadka ah. Nandrolone waxay hagaajinaysaa xaaladda guud ee waxtarka, sidaas darteed caawinta hagaajinta miisaannada iyo hagaajinta cuntada. Ma aha wax bedel u ah cunto caafimaad oo dheellitiran. Natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa laga filan karaa oo kaliya marka maamul wanaag iyo quudinta la isticmaalo.
Markaad eegto Nandrolone Cypionate Raw, alaabada Cypionate, oo lagu qiyaaso sida weyn oo ah halka hormoonka Nandrolone uu isku xiro isla markaana kanuna waxa uu ka caawiyaa sii-deynta wakhti go'an. Sida ugu dhakhsaha badan ee Nandrolone Cypionate Raw ee wax ka soo galo dhiigga, waxaa jira kala soocid of ester taas oo u ogolaanaya hormoonka inuu galo nidaamka. Tani waxay keenaysaa koror degdeg ah oo Nandrolone ah saacadaha 48 ee jirka lagu mudo, kadibna ay sii deynayaan si joogta ah oo joogto ah ee xerada loogu celiyo celcelis ahaan 2-toddobaadyo.
Nandrolone Cypionate Raw alaabta (601-63-8) Smamnuucista
Product Name Nandrolone Cypionate Raw alaabta
Magaca Kiimikada 17beta-hydroxyestr-4-en-3-hal 17-3-17-Cyclopentylpropionate; NANDROLONE CYPIONATE; NANDROLONE CIPIONATE; Nortestosterone Cypionate; Nandrolone Cypionate / Cyclopentanepropionate Nandrolone 4-en-3-one (3-Cyclopentylpropionate) ; 19-Nortestosterone 3-cyclopentylpropionate; Nandrolone cypiontate
brand NAme Anabo, Gaadiidka-Nortestonate, Dynabol,
Molecular Wsideed 398.57812
barafku Psaliid 80-82 ° C
Karkarinta: 525 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life qiyaastii 12 maalmood
SOlubility milmi Biyaha
Application Nandrolone Cypionate Raw waa qalab lagu talinayaa sidii gargaar loogu talagalay daaweynta waxyeellada marka kor u kaca miisaanka, dharka timaha ama xaalad guud oo jireed la doonayo.
Waa maxay Nandrolone Cypionate Raw alaabta (601-63-8)?
Nandrolone Cypionate Raw waa qalab lagu duri karo nandrolone anabolic steroid. Cabbiradaani wuxuu bixiyaa qaab asli ah oo la mid ah tan la mid ah cypionate testosterone, oo leh heerarka ugu sareeya ee daroogada lagu xusay qiyaastii 24-48 saacadaha ka dambeeya maamulka, iyo hormoonka sii-daynta ee la sii waday ilaa toddobaadyo. Xaaladdan oo kale hormoonka firfircoon waa nandrolone, kaas oo ah steroid anabolic oo dhexdhexaad ah kaas oo keena guryaha hodanka ah ee estrogenic iyo androgenic.
Badeecadani waxay asal ahaanba la mid tahay saameynta guud ee budada Deca-Durabolin (budada nandrolone decanoate), oo soo saarta guulo la qiyaasi karo oo xooggan iyo xajmiga murqaha, taas oo u eg inay la socoto heerarka hoose ee waxyeelada. Hal dhibic oo kala duwan ayaa ah in Nandrolone Cypionate Raw wax u muuqan karto inay noqoto mid si dhakhso ah u dhaqdhaqaaqa dadka isticmaala. Haddii kale, ma jiraan farqi u dhexeeya labada xeryood, iyo Nandrolone Cypionate Raw waxay beddeli kartaa budada nandrolone budada dib udhigga ah ee dhammaan wareegyada.
Sidee Nandrolone Cypionate Ceyrin (601-63-8) shuqullada
Nandrolone Cypionate Raw waa qalab wax ka beddelka nandrolone, halkaas oo ah aerosofilic acid ester (cyclopentylpropionic acid) ayaa lagu soo lifaaqay kooxda 17-beta hydroxyl. Isticmaalida steroids ayaa ka yaraada dabaysha oo ka badan steroids oo bilaash ah, waxaana si tartiib ah looga nuugay aagga cirbadda. Marka uu ku jiro dhiigga, qashin-qaadaha ayaa la saaraa si uu u bixiyo nandroloon lacag la'aan ah (firfircoon). Isticmaalka steroids ee loo yaqaan 'steroids' ayaa loogu talagalay inay sii dheeraato daaqada waxqabadka daaweynta ka dib markii la maamulo, taasoo u oggolaaneysa jadwalka mudista caañmaadka aan caadiga ahayn marka la barbardhigo cirbadaha steroid bilaash ah (unsterified). Nandrolone cypionate budada ah waxay bixisaa fiiq fiiqan ee nandrolone sii daaya saacadaha 24-48 ka dib markii la isku duro dheecaan dheeri ah, oo sii wado sii-deyn dheeri ah ee hormoon loogu talagalay qiyaastii 2.
Nandrolone Cypionate Raw Waxyaabaha (601-63-8) Qiyaasta
Waayo, Ragga: Marka loo isticmaalo ujeedo jirka ah ama ujeedooyin wax-qabad leh, qiyaas daawada 200-400 asbuucii ayaa ah midka ugu badan, laga bilaabo wareegyada 8 ilaa todobaadyada 12. Heerkani wuxuu ku filan yahay dadka isticmaala intooda badan in ay dareemaan guulo la qiyaasi karo oo ah qiyaasta murqaha iyo xoogga, taas oo ay la socoto heer hoose oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada estrogenic iyo androgenic. Inkasta oo qiyaasta sare (450-600 mg) ay soo saari karto saameyn xoog leh oo ah anabolic, marka la eego xaddiga hooseeya ee daroogadan la helay (50 mg / mL), qiyaaso ka sareeya mg 400 badanaaba lama isticmaalo. Taa baddalkeeda, daroogada ayaa badanaa la gashadaa wakiil kale, badanaa ahna qufac sida kaararka testosterone, taas oo sidoo kale ka caawisa in ay ka baxdo heerarka hoose ee ofrogenicity of nandrolone. Nooca steroid ee afka la gooyey, sida methandrostenolone ama oxymetholone, ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa sidoo kale, laakiin waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa qaar ka mid ah cagaarshowlaha waxayna leedahay saameyn xooggan oo ku saabsan lipids serum (si xun).
Waayo, Haweenka: Marka loo isticmaalo ujeeddo jir ahaaneed - ama ujeedooyin wax-qabad leh, qiyaasta daawada 50 toddobaadkii waa kuwa ugu badan. Inkasta oo ay yar tahay, haddana haweenku marmar ayay la kulmaan calaamadaha caabuqa marka ay qaadayaan xaruntan. Ciriiri saameeya saamaynta daawadu waxay noqoneysaa mid walaac ah, Nandrolone Cypionate Raw waa in la joojiyaa si dhakhso ah si looga caawiyo ka hortagga muuqaalkooda joogtada ah. Kadib wakhti ku filan oo ah ka-noqoshada, budada nandrolone nuugroloon Durabolin waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo ikhtiyaarka amaba la xakameyn karo. Daawadani waxay fir-fircoonaysaa maalmo yar, si weyn u yareeya wakhtiga ka-noqoshada haddii la tilmaamay.
Nandrolone Cypionate Raw alaabta (601-63-8) Faa'iidooyinka
Dhamaan ciyaartoyda iyo shakhsiyaadka xilli ciyaareedka ka baxsan, Nandrolone Cypionate Raw waxay cadeyn u tahay inay tahay daaweyn aad u wanaagsan oo bixiya faa'iidooyin badan oo la doonayo. Marka ay timaado Nandrolone, waxaa loo isticmaalaa qayb ka mid ah testosterone - Goobta Anadrol. Hadda, waxaa jira fursado balaadhan oo kor loogu qaadi karo muruqyada oo aad u sarreeya, lakiin tani ma dhici doonto habeenkii. Cabbirka muruqu wuxuu noqon doonaa qadar gaaban oo joogto ah.
Nandrolone Cypionate Raw waxay bixisaa tayada difaaca si ay u ilaaliso qulqulka muruqa caatada ah iyo tani waxay si gaar ah muhiim u tahay inta lagu jiro waqtiyada soonka iyo kalooriyada cuntada la xaddiday.
Marka qofku qayb ka qaato cunto kalooriye ah oo la xaddiday oo loo jarayo ujeedooyin goynta, jidhku wuxuu inta badan bilaabi doonaa in uu kobciyo qulqulka murqaha le'eg si uu isugu daydo inuu beddelo ilaha tamarta tamarta ka maqan. Xitaa iyada oo raashinka loo qorsheeyey, khatarta muruqyada ayaa la jajabiyey oo loo isticmaalay tamarta ayaa suurtagal ah iyadoo la isticmaalayo qalabka Nandrolone Cypionate Raw ama stabto kale oo la mid ah, khatarta arrintan si aad ah ayaa loo yareeyaa. Dabcan, waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin ka mid ah heerka sare loo qaaday ama soo kabashada, taas oo muhiim u ah marka jirkaaga loo tababaray si adag. Tani waxay ka caawisaa qofka inuu dhiso muruqa muruqyada iyo nadiifinta unugyada jirka si deg deg ah oo wax ku ool ah.
Soo iibso Nandrolone Cypionate Raw alaabta (601-63-8) ka Buyaas.com